नेपाल आज | राजनीतिको नमेटिने कलंक
राजनीतिको नमेटिने कलंक
यो जघन्य आपराधिक कार्य थियो, जसमा जिम्मेवार संघीय संसदको सभामुखले आफ्नो सचिवालयको कर्मचारीमाथि बलात्कार जस्तो जघन्य अपराध गर्यो । बलात्कारको घटनापछि उनलाई राजीनामा गर्न लगाइयो । त्यसका लागि नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका नेताहरु वर्तमान प्रधानमन्त्री अन्य ३ पूर्वप्रधानमन्त्री सहित नेता गण सवैलाई हार्दिक धन्यवाद गर्न मन लागेको छ । नेपाली जनता मानिस हुन । उनीहरुमा मनुष्यत्व छ । मानिसलाई मान सम्मानबाट अलग गर्न सकिदैन । त्यसैले मानव अधिकार दिने गरिन्छ ।
मानिसलाई मानिसले मानिसकै हैसियतमा हेर्ने नेपाली आदर्श माथिको यो गम्भीर नमेटिने कलंक हो । गणतन्त्र ल्याउँदा यत्ति अपमानित भएर नेपाल राष्ट्र लैजालान जस्तो त लागेको पनि थिएन । तर पर्दाभित्र गरिने कामहरु धमाधम पर्दाफास भइरहेकामा हामी आशावादी हुने अवस्थामा छौं । । संस्कार तथा प्रणालीले असल काम गर्दछ । वर्तमान व्यवस्थाको उन्नतिका लागि प्रणाली फेर्ने होइन कि स्थापित गरेर लैजान पर्ने देखिन्छ ।
एउटा महिला, जागिरे जसको पति छन, उनको भविष्य पनि छ । उनी नारी पात्र पनि हुन छोरी, वुहारी, पत्नी, भान्जी आदि नाताको वहुआयामिक भूमिकामा पनि छन । उनीमाथि रातको ९ बजेको समयमा रक्सीको बोतल लिएर कोठामा संघीय संसदको सभामुखले हातपात वल प्रयोग गरी यौन तृप्ति गर्नु कतिसम्म पासविक कार्य हो, जो मैले कल्पनासम्म पनि गरेको थिएन ।
तर उनका विगतका धेरै कृयाकलाप हेर्दा धर्म परिवर्तन गरी ईसाइ पादरीको सपथ ग्रहण गरेको, सांसद खरिदका लागि चिनियाँ पार्टीसंग प्रति व्यक्ति ५ करोडको दलाली, सुनकाण्ड, लडाकुको पैसामा अनियमितता, अर्थमन्त्री हुँदा करोडौंका योजनाको रकमान्तर, आफूविरुद्ध अख्तियारमा परेको उजुरी सामसुम पार्न शंकास्पद व्यक्तिहरुसंग हिमचिम जस्ता विषयले उनलाई विवादको सतहमा ल्याएकै हो ।
यिनका गतिविधि हेर्दा लाग्थ्यो– कमरेड प्रचण्डले के यस्ता मान्छे लिएर अगाडि आउनुभएको होला ? अरु पनि धेरै असल निष्ठावान मानिस थिएनन र ? योग्यलाई अगाडि ल्याएको भए राम्रो हुन्थ्यो । आखिर त्यो आज सत्य सावित भो । उनी उहिल्यै नै सडिएका गन्धा व्यक्ति रहेछन । त्यो घटनामा लिखित जाहेरी माग गर्नु, त्यो पनि हालको अवस्थामा नेपाली समाजमा आम महिला जगतमाथिको चुनौती हो । त्यो भन्दा थप के हुन सक्दछ ?
महराजीको फुटेको चश्मा, जुत्ताको तलवा रक्सीको बोतल, पीडितको शरीरका निलडाम अनि उनीहरुको बीचको कल डिटेल्स तुरुन्त प्रहरी आएर गरेको घटनाको मचुल्का, विवरण तथा त्यसपछिको अरु अध्ययन तथा त्यसको परीक्षणले घटना घटे घटाएको सत्य हो । र त्यो जघन्य अपराध हो भन्नेमा विवाद छैन ।
दाशतालाई राजनीतिक दलीय दर्शन, नीति, कार्यक्रम, रणनीति तथा त्यसको आधार प्रभावमा स्वीकारिन्छ भने त्यो आम मानिसको, नेपालीको त्यसमा पनि आम पुरुषको चरित्रमा दाग लाग्ने वियय हो । यसले ऋभ्म्ब्ध् को धारा ३, ७, ९, १२, १५ विपरित नेपालले कार्य गरेको हुन जान्छ । यसले नेपाली सज्जन पुरुषले सधैं शीर झुकाएर रहन पर्ने देखिन्छ । ती पीडित महिलाले त्यतिसम्म गर्नु उनी महान हुन जसले महाभारतमा द्रौपदी झैं जे जानेको सकेकी थिइन, त्यही गरिन ।
उनी निष्पाप हुन । तर अपराधीलाई थप अनुसन्धान गरी अपराधीमाथि कारबाही तथा पीडितलाई न्याय दिन सके भोलिका दिनहरुमा यस्ता अपराधीले शीर उठाउने हिम्मत गर्दैनन । होइन, यो हामी दुई जनाको सम्बन्ध तथा सरोकारको विषय हो भन्ने आदि संकथन जोडेर अपराधीलाई पनि छूट दिँदै जाने हो भने सवै खालको विचार, तह, तप्का तथा हैसियतमा रहेका इमान्दार नैतिवान चरित्रवान निष्ठा बोकेको असल तथा सभ्यहरुले यस्तै जंगलीहरुबाट पीडित भएर रहनु आफ्नो पनि पालो पर्खेर बस्ने दिन आयो भन्नै पर्ने देखिन्छ ।
सभामुख नारी पात्र
चिनियाँ राजदूतसँग रोमान्स गर्न इच्छाएका प्रोफेसरको मुड बदलियो, लाजै पचाएर माफे माफी !
२०७७ असार २९ गतेको राशीफल